Medical Writings: Hepatitis A, B, C, D, E အသဲရောင်ရောဂါများ
အသဲရောင်စေသည့် (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုး ၅ မျိုးရှိသည်။ A, B, C, D, E တို့ဖြစ်ကြသည်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးမှ ကူးသည့် အခြား ရောဂါများမှာ အအေးမိခြင်း၊ ခွေးရူးပြန်ခြင်း၊ အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများ၊ ဦးနှောက် အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း၊ ရေယုံ၊ ဝက်သက်ရောဂါ၊ တုပ်ကွေး၊ ရေကြောက် တို့ဖြစ်ကြသည်။
1. အစာထဲက အဆီ၊ ဆီတို့ကို အစာခြေပေးသည်၊
2. အား (အင်နာဂျီ) ကို သိုလှောင်ထားသည်၊
3. အဆိပ်အတောက်ကို ဖယ်ရှားပစ်သည်၊
4. (ဘိုင်းလ်) အစာခြေရည် ထုတ်ပေးသည်၊
5. ကိုလက်စထရော၊ သွေးခဲစေသည့် ပစ္စည်းများ၊ ပရိုတင်းများ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
1. အသား (မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အရေပြား၊ ဆီး) ဝါခြင်း၊
3. အသဲနေရာက နာခြင်း၊
4. LFT အသဲလုပ်ငန်းများအား စစ်သောအခါ (ဘီလီရူဗင်) များနေသည်။
Hepatitis A အသဲရောင် အေ = Viral Hepatitis/Infectious Hepatitis
• ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ • (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးများမှ ကူးသည်။ • အသေအပျောက်ရှိသည်။ • ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်္ဘဘာ (၃) လ အထူး ဂရုစိုက်ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာများ အားနည်းခြင်း ခံစားရသည်၊ မစားချင်၊ မသောက်ချင် ဖြစ်လာသည်၊ ဖျား၊ ချမ်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ အန်၊ အသား (မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အရေပြား၊ ဆီး) ဝါလာသည်။ Jaundice ဟုခေါ်သည်။ ဖြစ်စေသော အခြားရောဂါ အများအပြားလဲ ရှိသည်။ အသဲရောင်သဖြင့် ရင်ဘတ်ညာဘက်အောက်ပိုင်းနေရာ သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်ညာဘက် အထက်ပိုင်းနေရာ၊ သို့မဟုတ် ရင်ခေါင်းနေရာက နာလာသည်။
ကာကွယ်ပုံ • ပါးစပ်ထဲဝင်သည့် (ရေ၊ နို့၊ ဖျော်ရည်) တို့ကို ပွက်သွားအောင် ကြို၍သောက်ပါ။ ရေသန့်ဆေး (Chlorine tablet) ထည့်၍ သုံးပါ။ ပွက်သွားအောင် ကြိုမထားသောရေနှင့် ရေသန့်ဆေး ထည့်မထားသောရော၊ ရေသန့်ပုလင်းကရေ မဟုတ်ပါက မသောက်ပါနှင့်၊ • (အစားအစာ) တို့ကို ပွက်အောင်ပြုတ်၊ ကျော်၊ ပေါင်း၊ ချက်ထားသည့်အစာကို ပူနွေးနေစဉ် စားပါ။ ချက်ပြုတ်ပြီးပါက ယင်ကောင် မနားစေရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ယင်ကောင်၏ ခြေထောက်၌ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သည်။ အပြင်းစာ၊ အပြင်ဆိုင်က ရောင်းသည့် အစာများကို သန့်-မသန့် စစ်ဆေးပြီးမှ စားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မစားပါနှင့်။ ရောဂါရှိသူ ချက်ပြုတ်ကျော်လှော် ဆေးကြောသည်မှ ကူးစက်နိုင်သည်။ • Hepatitis A အသဲရောင်အသားဝါရောဂါ A ကာကွယ်ဆေး သည် 95% ထိရောက်သည်။
အခြားနည်းများ • ရေလောင်း အိမ်သာကိုသာ သုံးပါ။ မရှိပါက ယင်လုံအိမ်သာ သုံးပါ။ • ဆီးဝမ်းသွားပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနှင့် လက်ဆေးပါ။ • အသီးအနှံများကို မစားမီ ရေသန့်သန့်ဖြင့် ဆေးပါ။ ဆားရေဖြင့် ဆေးက ပိုကောင်းသည်။
ကုသခြင်း • အနားယူပါ၊ • ရေ၊ အရည်များများသောက်ပါ။ • လိုအပ်ပါက သွေးထဲ သွင်းပေးပါ၊ • အဆီ၊ ဆီ လျှော့စားပါ၊
• အရက်၊ မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ ပြင်းသည့် ဆေးဝါးများ ရှောင်ပါ။ • အသဲအားဆေး သောက်ပါ၊ ထိုးပါ၊
Hepatitis B Hepatitis B virus (HBV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ကူးစက်ရောဂါအပြင်းစားဖြစ်သည်။ အသဲကင်ဆာ၊ အသည်းခြောက် ရောဂါနှင့်၊ အသဲအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်းတို့ကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ HIV ကဲ့သို့ သွေး-ဆေးထိုးအပ် မှတဆင့်၎င်း၊ ကိုယ်ကထွက်သော အရည်များက၄င်း၊ မိခင်က ကလေးသို့၎င်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ၎င်း ကူးစက်နိုင်သည်။ သို့သော် HIV ထက် အဆ ၁ဝဝ ပို၍ ကူးစေသည်။ အချို့မှာ လက္ခဏာများ ဆိုးစေကာမူ ပျောက်ကင်း သွားသည်။ ကလေးများဖြစ်လျှင် ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ၆ လ အောက် ရက်တိုနှင့် ၆ လအထက် နာတာရှည် ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
Signs and symptoms ရောဂါလက္ခဏာများ လက္ခဏာ မပေါ်ဘဲ ပိုးရှိနေတတ်သည်။ ပိုးဝင်ပြီး တလခွဲအကြာ လက္ခဏာများ ပေါ်မည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာနာခြင်း၊ ဆီးအရောင် ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ Hepatitis B surface antigen (HBsAg), Antibody to hepatitis B surface antigen (anti-HBs), Antibody to hepatitis B core antigen (anti-HBc) တို့ကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးရှိ-မရှိ သိနိုင်သည်။
ပိုးနှင့်တွေ့သည်ဟု သံသယရှိပါက Hepatitis B immune globulin within 24 hours နှင့် Hepatitis B vaccine x3doses ဆေးထိုးရမည်။ Interferon, Lamivudine (Epivir-HBV), Adefovir dipivoxil (Hepsera), Entecavir (Baraclude) ဆေးများပေးနိုင်သည်။ Liver transplantation အသဲအစားထိုးခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
Hepatitis C (စီ) ပိုးသည် လက္ခဏာမပေါ်ဘဲ ပိုးရှိနေတတ်သည်။ Hepatitis C virus (HCV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ကူးစက် ရောဂါ အပြင်းစား ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အသဲကင်ဆာ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါနှင့် အသဲအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းတို့ကို ဆက်ဖြစ် စေနိုင်သည်။ လိင်မှတဆင့် မကူးစက်၊ ဆေးထိုးအပ်ကတဆင့် ကူးစက်သည်။ မိခင်မှ ကလေး ကူးသည်။ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေး။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အနည်းငယ် အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ တုပ်ကွေးလိုဖြစ်ခြင်း၊ သွေးစစ်၍ သိနိုင်သည်။ အချို့က ပျောက်သွားနိုင်သည်။ အချို့က နာတာရှည်ဖြစ်မည်။ Weekly injections ofadrug called pegylated Interferon alfa combined with Ribavirin (Rebetol) BD ဆေးများ ပေးနိုင်သည်။ အသဲ အစားထိုးခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
Hepatitis D (HDV) သည် လိင်-သွေးမှတဆင့် ကူးသည်။ (B) ပိုးရှိနေမှ (D) ပိုးကူးသည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ (B) ပိုး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သည်။ Interferon-alfa ဆေးပေးခြင်း၊ အသဲအစားထိုးခြင်း လုပ်ပေးနိုင်သည်။
Hepatitis E (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုး (E) သည် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ဖြစ်စေသည်။ ကင်ဆာ ဖြစ်သွားစေသည်။ ကူးစက်ပုံမတူ၊ HIV-AIDS ကဲ့သို့ ဆေးထိုးအပ်မှ၎င်း၊ ကျား-မ အတူနေ၍၄င်း ကူးသည်။ မိခင်မှ ကလေးအား ကူးသည်။ (B) ပိုးရှိနေမှ (D) ပိုးကူးသည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင် ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း တို့ဖြစ်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၌ အဖြစ်များသည်။ နာတာရှည်မဖြစ်၊ (A) ကဲ့သို့ အစား-ရေကတဆင့် ကူးစက်သည်။
• (A) နှင့် (E) တို့သည် (စအို) မှ ထွက်၍ (ပါးစပ်) သို့ ဝင်သည့် လမ်းကြောင်းက ကူးစက်သည်။
• (B) သည် အတူနေခြင်း၊ လိင်လမ်းကြောင်း၊ သွေး၊ ဆေးထိုးအပ်၊ ကလေးအား မိခင်တို့မှတဆင့် ကူးသည်။
• (C) သည် ဆေးထိုးအပ်မှ ကူးသည်ကများသည်။
• (D) သည် ထိတွေ့ခြင်းနှင့် ဆေးထိုးအပ်တို့မှ ကူးသည်။ (B) ရှိနေလျှင် ဖြစ်တတ်သည်။
• (စအို) မှထွက်၍ (ပါးစပ်) သို့ဝင်သည့် လမ်းကြောင်းက ကူးစက်သည့် အခြားရောဂါများမှာ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊
ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ အူရောင်ငန်းဖျားခေါ် တိုက်ဖွိုက် (Typhoid) ရောဂါ တို့ဖြစ်ကြသည်။
• အရက်၊ မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ ပြင်းသည့် ဆေးဝါးများ ရှောင်ပါ။
• အသဲအားဆေး သောက်ပါ၊ ထိုးပါ၊
• (B) ပိုးနှင့် ထိတွေ့ရပါက Hepatitis B immune globulin injection ကို ၁၄ ရက်အတွင်း ထိုးပါ။ Hepatitis B ကာကွယ်ဆေး ၃ ခါထိုးပါ။
• (C ) ဖြစ်လျှင် (A) ၂ ခါ၊ (B) ၃ ခါ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပါ။
• (C) အတွက် Pegylated Interferon and Ribavirin ဆေးပေးရသည်။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:19 PM